Norway: 10-kan kuliyadood ayaa sanadkan jaamacadaha ugu adkaa in lasoo galo. - NorSom News
Norway: 10-kan kuliyadood ayaa sanadkan jaamacadaha ugu adkaa in lasoo galo.
Isbuucii na dhaafay ku dhawaad 100.000 Ardey ayaa heshay boosas jaamacadeed, kadib markii ay jawaabo ka heleen codsiyada jaamacadaha ay sandman codsadeen.
Kuliyada dhakhtarnimada ayaa wali heysato booska koowaad ee kuliyadaha ugu adag ee ardeydu ay soo gali karaan jaamacadaha Norway, Iyada oo ah kuliyada ay sanad walba codsadaan ardeyda ugu badan, marka laga reebo kuliyada sharciyada.
Sidoo kale akhri: Kuluyadaha ugu badan oo ay ardeydu codsadeen.
Hoos ka fiiri liiska 10-ka kuliyadood ee sanadkan ugu adkaa in lasoo galo:
Kala xiriir: 45970350 ama diix sawirka, si Aad toos ugu gasho webkooda.
Previous articleUK oo yeelatay Reysulwasaare meelo badan uga eg Donald Trump.
Next articleSiyaasi dhalinyaro soomaali ah oo lagu sharfay xuska maalinta 22-Juli.